Navoaka ho an'ny mpampiasa rehetra ny MacOS Big Sur 11.4 Avy amin'ny mac aho
Navoaka ho an'ny mpampiasa rehetra ny MacOS Big Sur 11.4
Manana fanavaozana lozisialy Mac vaovao azo alaina ankehitriny izahay. Momba izany macOS Big Sur 11.4, ny fanavaozana lehibe fahaefatra an'ny macOS Big Sur, hatramin'ny volana Novambra tamin'ny taon-dasa.
Vao nitranga izany iray volana hatramin'ny farany ny macOS farany, saingy tsy midika izany fa tsy zava-dehibe izany. Indrindra amin'ny haavon'ny fanitsiana anatiny lehibe sy ny filaminana. Andao hojerentsika izay vaovao azon'ny mpampiasa mankasitraka omeny antsika.
Navoaka fotsiny tao amin'ny mpizara Apple macOS Big Sur 11.4, ny fanavaozana fahefatra manan-danja amin'ny rafitra fiasan'ny macOS Big Sur hatramin'ny nanombohany ny volana novambra 2020. macOS Big Sur dia tonga iray volana taorian'ny nanombohan'ny macOS Big Sur 11.3, fanavaozana izay nanampy fanatsarana ho an'ny processeur M1 vaovao, fampidirina amin'ireo AirTags vaovao ary vitsivitsy zavatra bebe kokoa.
Toy ny mahazatra, ny fanavaozana macOS Big Sur 11.4 vaovao dia azo alaina maimaimpoana amin'ireo Mac rehetra azo ekena amin'ny alàlan'ny fizarana "Fampivoarana ny lozisialy" ao amin'ny "System Prefers."
macOS Big Sur 11.4 dia mametraka ny dingana ho an'ny endri-javatra roa ho avy amin'ny Apple Music: Audio Spatial miaraka amin'i Dolby Atmos sy Lossless Audio, samy misy amin'ny solosaina Apple.
Izy io koa dia manampy fanohanana ny famandrihana Apple Podcasts ary manamboatra bibikely madinidinika maromaro, araka ny voalaza ao amin'ny naoty famoahana an'i Apple:
Ny tsoratadidy ao Safari dia azo averina narindra na afindra amin'ny fampirimana mety hiseho miafina.
Ny tranokala sasany dia mety tsy hiseho tsara aorian'ny fiverenan'ny Mac avy natory.
Ny teny lakile dia tsy azo nampidirina rehefa nanondrana sary avy amin'ny fampiharana Photos.
Mety hitsahatra tsy hamaly izany ny topi-maso rehefa mitady rakitra PDF.
Ny MacBook 16-inch dia mety hianjera amin'ny lalao "Civilisation VI".
Manomboka izao, ny mpamorona Apple dia hifantoka amin'ny macOS ho avy, macOS 12, izay antenaina haseho amin'ny Fihaonamben'ireo Mpampivelatra Manerantany manomboka ny 7 Jona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Big Sur » Navoaka ho an'ny mpampiasa rehetra ny MacOS Big Sur 11.4
Baltasar Malagon dia hoy izy:
Ny fanavaozana Big Sur 11.4 dia mandefa hadisoana efa ho vita. Inona no azoko atao hanavaozana?
Manana MacBook Air aho
Valiny tamin'i Baltasar Malagon